Led Linear High Bay, Led Linear High Bay Light, Linear High Bay Light Manufacturers and Suppliers in China
Nkọwa:Led Linear High Bay,Led Linear High Bay Light,Linear High Bay Light,Linear Led High Bay,,
Home > Ngwaahịa > LED Linear High Bay Light
Ngwaahịa nke LED Linear High Bay Light , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Led Linear High Bay , Led Linear High Bay Light suppliers / factory, wholesale high-quality products of Linear High Bay Light R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Kwapịa Ngwunye Linear nke 60W Nwepụta Ntugharị Ndagharị  Kpọtụrụ ugbu a
4W 300A Nweta Linear Suspension High Bay Fixtures  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwa 200W Led Linear Low Bay Light Fixtures  Kpọtụrụ ugbu a
2GB 150W Led Linear Oge Mgbaaka  Kpọtụrụ ugbu a
100W Ejiri Nlekọta Ịgba Ọhụụ Maka Ụlọ Ọrụ  Kpọtụrụ ugbu a
400W Led Linear Pendant Lighting  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye Ngwunye Nwepu Mmiri Ntụkwasị Obi 300W Led Linear  Kpọtụrụ ugbu a
200W Linear Led High Bay Lake Light  Kpọtụrụ ugbu a
160W Linear High Bay na-etinye ntanye ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
100W Led Linear High Bay Lighting 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
2ft ogologo 60W Led Linear Lighting Solutions with 7800 lumens very bright, Save energy of over 50%! The 60w Dugara Linear Retrofit Kit nwere ike bee gị electric ụgwọ na ọkara iji ọkọlọtọ 200 watt elu n'ọnụ mmiri lights.5 afọ ogologo factory...
Nke a Led Linear nkwusioru 300W na-enye 39000 Lumens na 5000K ìhè White. Nke ahụ bụ ọrụ ọkụ arụmọrụ nke 130lm / w! The e nergy ego a Dugara Linear N'uko Light bụ ruo 65% anyị ngwaahịa lifespan. Ngwa 300w Led Linear High Bay Fixtures depụtara ihe...
Nke a 2ft Dugara Linear eletrik bu ndi na-azoputa ego, ike nke oma karia ihe omimi ma obu fluorescent T5. Ngwunye Line 150 a nke a na-ahọrọ maka ọkụkọ, ụlọ mgbakọ, na ngwa ngwa. Ejiri ihe nkedo nke ejiri kpochapu nke a na- eme ka a ghara ikpochapu...
Nke a dị 100 Watt 2ft Led Linear Pendant bụ ike mgbanaka dị ike maka ọdịdị ọdịdị ọdịdị ọdịnala ọdịnala na ọkụ ọkụ dị na HID. Led Linear Light Fixtures emepụtala 13,000 lumens iji 100 watts. Ebube Ntanetị Led Line maka ngwa gụnyere: ụlọ nkwakọba ihe,...
Ọnụahịa otu: USD 97.6 - 99.6 / Piece/Pieces
400W Led Linear Pendant Lighting Anyị 400W Akwụsịla Linear Dugara Lighting bụ 52000 Lumens na 5000K ìhè-acha ọcha. The lumen irè nke a Commercial Linear Pendant ọkụ karịrị 130lm / W na Linear Led Pendant nwere ike ịchekwa 75% ụgwọ eletrik ozugbo....
Ọnụahịa otu: USD 77.6 - 79.6 / Piece/Pieces
Nke a Linear ejiri ìhè tụnyere 300w bụ akwa mmepụta ìhè ntinye na 39000 lumens! Egwuregwu anyị dị na mbara igwe ga-enye ìhè ọ bụla dị n'ime ime ụlọ na akwa akwa ụlọ dịka garages, ụlọ nkwakọba ihe, na ebe obibi. Belata isi ọwụwa na eyestrain ka ị...
Ọnụahịa otu: USD 57.6 - 59.6 / Piece/Pieces
Jiri 600w HID ma ọ bụ 6 lamp fluorescent T5 / T8 elu bay, anyị 200W Linear Led High Bay bụ 130 lumens per watt na-ebute ọrụ dị egwu 26,000 nke CRI 85! Igwe ọkụ a dị na Led nwere obere ihe oriri na nnukwu mmepụta na-azọpụta gị nnukwu ego! Nhazi nke...
Ọnụahịa otu: USD 47.6 - 49.6 / Piece/Pieces
Anyị 160W Linear High Bay nwere ọkụ nwere ike dochie 400W MH / HID ìhè ma zọpụta 74% na gị eletriki ụgwọ. Nke a Linear High Bay nwere ndụ nke 50,000+ awagoro na L80 na ndụ nwere ihe karịrị 100,000 awa iji belata mmezi mmezi ndụ. Bipier Led Linear...
Bbier 100W Led Linear High Bay Ligh t na 13000lm nnọọ na-enwu gbaa, Nchekwa ikike nke karịrị 80%! Nke a 100w Led Linear Light nwere ike wedata ụgwọ eletrik gị na ọkara site na iji ọkọlọtọ 300-400 watt high bay lights. Led Linear High Bay nwere...
Ikanam Linear High Bay Ligh t si Bbier bụ ikanam anọchi fluorescent tube ọkụ fixtures, Dugara Linear High Bay bụ ezigbo nnọchi maka omenala fluorescent ọkụ ke n'ụlọ nkwakọba na ndị ọzọ na nnukwu ime spaces.ideal maka aisles ma ọ bụ elu uko ụlọ, Jiri maka n'ụlọ nkwakọba, ụlọ mmega , garages, ụlọ oriri na nkwurịta okwu, ebe ị na-ere ahịa, na ụlọ nnukwu ụlọ. Linear High Bay Light series bụ DLC Listed & ideal for one-to-one replacement for conventional HID, T8 na T5.LED mpempe akwụkwọ akwa baytures dị na dị iche iche ... nha, na okpomọkụ agba iji kwekọọ na gị mkpa nnukwu ọkụ ọkụ. ihe ndị a dị na Linear Led High Bay dị oké ọnụ ahịa na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Summit LED linear High Bay bụ ezigbo ihe ntụgharị maka otu HID na usoro ọkụ ọkụ ọkụ na nnukwu oghere ime ụlọ. Nke a bụ LED Linear High Bay bụ ihe ọhụrụ ihe ngwọta na-agbanwe maka fluorescent linear elu n'ọnụ mmiri na ụlọ nkwakọba akụ.